WARBIXIN: Warar Ku Saabsan Taariikhda, Farsamada & Tayada Saxiixa Cusub Ee Barca, Arthur » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Falanqeynta/WARBIXIN: Warar Ku Saabsan Taariikhda, Farsamada & Tayada Saxiixa Cusub Ee Barca, Arthur
WARBIXIN: Warar Ku Saabsan Taariikhda, Farsamada & Tayada Saxiixa Cusub Ee Barca, Arthur
Barcelona, ayaa waxay si rasmi ah ay ugu dhawaaqday inay heshiis ay la gashay ciyaaryahanka lagu magacaabo Arthur, waxayna daboolka ka qaaday camaaliqada La Liga in Julaayo ay 30 Milyan ku iibsaneyso xidigaan.
Hadaba: maxaan ka naqanaa wiilkaan? Halkaan ayaa waxaan idin kugu soo gudbin doonaa Taariikhda, Farsamooyinka iyo Tayada uu wiilkaan leeyahay.
Magaciisa oo dhameystiran waa Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, waxaana si fiican loogu yaqaanaa Arthur, waana mid ka dheela khadka dhexe, islamarkaana awood u leh inuu Baas tayo leh uu sameeyo.
Wuxuu ku dhashay meesha la dhoho Goiania oo ku taalo wadanka Brazil.
Ciyaaryahnkaan ayaa wuxuu tayadiisa ku muujiyay kooxda dalkiisa ka dhisan ee Gremio, isagoona kula guuleystay Brazilian Cup iyo Copa Libertadores.
Wuxuu soo metalay xulka Brazil gaara ahaan ciyaartoyda ay da’doodo ka hoyso 20sano jirka iyo 17sano jir isagoona lasoo ciyaaray laacibiin ay kamid yihiin Paulino and Coutinho, kuwaasoo Barcelona udheela hada.
Arthur, waa laacib dhexda marka uu uga dheelayo kooxdiisa awood badan u leh inuu halis ku abuuro kooxda kasoo horjeeda, islamarkaana usi fiican uyaqaana sida loo ugaarsado xidigaha kasoo horjeeda.
Sidoo kale, waa ciyaaryahan kaasoo si fiican uxakamayn kara kubad walba oo loosoo baaso marka uu garoonka ku jiro, goobtuu doono haka joogee.
Farsamo-yaqaankaan ayaa xirfadiisa kubada cagta wuxuu kasoo bilaabay sanadkii 2008, wuxuuna kooxdii ugu horeysay ee uu udheelo waxay ahayd Goiás Esporte Clube, ka hor inta uusan Porto Alegre ku biirin sanadki 2010.
Arthur, wuxuu lasoo shaqeeyay macalin Luiz Felipe Scolari, waxaana tababarihii hore ee qaranka Brazil, isagoona wax badan lasoo qabtay.
Mid kamid ah kulamadii ugu horeeyay oo uu dheelo wuxuu ahaa ciyaar ay garaacee Lanus oo dalka Argentina ka dhisan, markaasoo ay qaadeen Copa Libertadores, isagoona ciyaartaas loo magacaabay midkii garoonka ugu fiicnaa.
Sikastaba ka sheekeynta tayada uu xidigaan leeyahay ma ahan mid lagu soo koobbi karo warbixin oo kaliya, waxaana taageerayaasha Barcelona ay yihiin kuwa aad uga dhowrayo xidigaan wax qabad aad u badan, marka uu yimaado.